Eventbrite + Teespring: မင်းရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့တီရှပ်တွေကိုရောင်းပါ Martech Zone
Eventbrite + Teespring: မင်းလက်မှတ်တွေနဲ့တီရှပ်တွေကိုရောင်းပါ
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 28, 2016 သောကြာနေ့, ဧပြီ 29, 2016 Douglas Karr
ကျနော်တို့နှစ်စဉ်လည်ပတ် ဂီတနှင့်နည်းပညာပွဲတော် နှစ်စဉ် Indianapolis ၌တည်၏။ ဒေသတွင်းတိုးတက်မှုအခမ်းအနားကိုကျင်းပရန်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများယူဆောင်လာခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းတိုးတက်မှုကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်အားလပ်ရက်တစ်ရက်ယူဆောင်ရသောအလွန်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွေးကင်ဆာ & Lymphoma Society က.
ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်ပွဲကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပြီး၊ အခြားကုမ္ပဏီများအားအပိုကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးရန်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသော်လည်း, စပွန်ဆာရန်ပုံငွေပုံမှန်အားဖြင့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာလာ ... သိပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်အချိန်မချန်ဘဲ!
သို့သော်နည်းပညာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လာမယ့်နှစ်မှာကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုနည်းနည်းစီစီစဉ်ပြီးပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့သေချာအောင်အကောင်အထည်ဖော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုကပွဲလက်မှတ်များနှင့်ပွဲလက်မှတ်များနှင့်အတူရောင်းအားကိုပေါင်းစပ်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ Eventbrite နှင့် Teespring setup ကိုကိုယ့် system ကိုရှိသည်။ ရုံထည့်ပါ Teespring အက်ပလီကေးရှင်း သင့်အဖြစ်အပျက်နှင့်သင့်တီရှပ်ကို setup လုပ်ပါ။
Eventbrite မှ Teespring နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အနုပညာလက်ရာများကိုကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာတင်ခြင်း၊ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်တက်ရောက်သူများနှင့်ပရိသတ်များမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သောအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုကိုချက်ချင်းဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုသင်၏ဖြစ်ရပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှင့်တင်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအဆုံးသတ်လိုပါက Teespring သည်အမှာစာအားလုံးကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ ယ်ယူသူများထံပေးပို့လိမ့်မည်။ သင်၏တက်ရောက်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊
ထုတ်ဖော်: ငါတို့ပါပဲ Eventbrite ရည်ညွှန်းအစီအစဉ် link ကို။
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Robots.txt ဖိုင်အသစ်ကိုပြန်လည်တင်သွင်းနည်း